Nigranee | » आज सोमबारे व्रत बस्नुभएको छ? थाहा पाउनुहोस् फाइदा आज सोमबारे व्रत बस्नुभएको छ? थाहा पाउनुहोस् फाइदा – Nigranee
निगरानी October 14, 2019 105
काठमाडौं- मानिसका आआफ्नै इच्छा हुन्छन् । कोही दैनिक नयाँ नयाँ परिकार खाने अनि कोही भोकै व्रत बस्ने । धार्मिक तथा वैज्ञानिक दुवै कारणबाट हप्तामा एक दिन बस्ने व्रत स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार व्रत शारिरीक स्वास्थ्यको दृष्टि महत्वपूर्ण छँदैछ, बार अनुसारको लाभ पनि फरकफरक रहने विश्वास गरिन्छ । सोमबार व्रत बस्दा के फाइदा हुन्छ ? धर्मशास्त्रमा के भनिएको छ ? तपाईंलाई चासो हुन सक्छ । सोमबारको व्रत बस्दा शिव र पार्वतीको पुजा तथा आराधना गरिन्छ ।